युरोकपमा इटाली र इंग्ल्यान्डबीच भिडन्त, कस्ले जित्ला ? « रिपोर्टर्स नेपाल
युरोकपमा इटाली र इंग्ल्यान्डबीच भिडन्त, कस्ले जित्ला ?
काठमाडौं, २७ असार । युरोकपको आज हुने फाइनलमा इटाली र इंग्ल्यान्डमध्ये कस्ले जित्ला ? इटाली र इंग्ल्यान्ड दुवैको इतिहास र वर्तमान केलाउँदा ठोकुवा गर्न सजिलो छैन । इंग्ल्यान्ड उपाधिको लामो खडेरी मेट्न आतुर छ । ऊसँग क्षमतावान् खेलाडी र बलियो टिम छ । इटालीसँग फुटबलको बलियो इतिहास छ । फुटबल भनेपछि मरिहत्ते गर्ने इटालीवासीको हौसला पनि छ ।
फिफा वरियतामा इंग्लायन्ड चौंथो र इटाली सातौं नम्बरमा छन् । यसकारण पनि दुई टोलीको स्तरमा खासै फरक छैन । तर, खेल्ने शैली भने निकै फरक छ ।
फुटबलमा इतिहास इटालीको पक्षमा छ । इटाली ४ पटक विश्वकप विजेता राष्ट्र हो । सन् १९३४, १९३८, १९८२ र २००६ मा इटालीले विश्वकप जितेको छ । त्यसैले फुटबलमा इटालीको गर्वलायक इतिहास छ । तर, गत विश्वकपमा इटाली छनोट नै भएन । सन् २०१० र २०१४ को विश्वकपमा समूह चरणबाटै बाहिरियो । तर, यसपटक रोबर्टो मान्सिनीबाट प्रशिक्षित इटाली बलियो भएको छ ।